Nzọụkwụ 5 iji merie na Akaụntụ Dabere na Ahịa | Martech Zone
Nzọụkwụ 5 iji merie na Akaụntụ Dabere na Akaụntụ
Wednesday, April 5, 2017 Tuesday, August 1, 2017 Rishi Dave
Ahịa na-ere ahịa (ABM) na-enweta ala n'etiti ndị na-ere ahịa B2B. Dị ka otu nnyocha e mere na nso nso a si dị, 2017 B2B Mmemme Mmemme, 73% nke ndị na-ere ahịa B2B ugbu a na-eji ma ọ bụ na-eme atụmatụ ịnakwere ABM na 2017. Ma ọ bụ ezigbo ihe kpatara ya: ABM's ROI nwere ike ịka mma karịa ahịa B2B ndị ọzọ.
ABM abụghị echiche ọhụrụ. N'ezie, ụfọdụ na-arụ ụka na ABM adịla kemgbe ahịa. Ọ bụ atụmatụ na-emeso akaụntụ ọ bụla dị ka ahịa, na-enye ohere maka njikọta zuru oke n'etiti ahịa na ahịa.
Taa, ndị ahịa na-arụ ọrụ ngwa ngwa n'ihi ụba ojiji nke njikọ data ma sie ike nchịkọta n'ime ahia. N'elu nke ahụ, data na-aghọwanye ihe ezigbo oge na scalable site na nyiwe Data-as-a-Service (DaaS). Nghọta ndị a na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịghọta nke ọma na ịchọpụta akaụntụ ha kacha baa uru, nke na-akwadebe ha ka ha bute ihe onwunwe ụzọ mgbe ha na-etinye akụkọ ndị ahụ site na ọnya ahịa.
ABM abụrụla isi maka usoro mmepe azụmaahịa anyị na Dun & Bradstreet. Anyị na-eji data, nchịkọta na mmekorita ya na ire ahịa na-ebute ụzọ ọhụụ ụzọ.
Na ada ụda mfe ezu, nri? Ọ bụghị ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe dị mfe n’elu, ABM nwere ike ịbụ usoro dị mgbagwoju anya nke na-achọ igbu egbu na ntinye sitere n’aka ndị otu gị niile.
Nke a bụ usoro ise ga - enyere gị aka ịmepụta usoro mmeri ABM maka azụmahịa gị.
Kwụpụ 1: Zụlite Ndị Na-arụ Ọrụ Na-arụ Ọrụ
Tupu anyị ebido ABM na Dun & Bradstreet, anyị lekwasịrị anya na ọdịbendị anyị, usoro ịga ahịa na ozi, nke gụnyere ịmepụta echiche ọhụụ na usoro emelitere dị ka akụkụ nke ọgbara ọhụrụ anyị.
Anyị mepụtara usoro izipu ozi gburugburu mmadụ nke jikọtara nke a na isi ihe mgbu anyị na-edozi, nke tọrọ ntọala maka atụmatụ ABM anyị. N’agbanyeghi otu igwe dijitalụ gị si dị mma, ọ bụrụ n’inweghị ihe dị iche ịsị na ọdịbendị na-akwado ya, ị nwere ike ị gaghị agabiga ọgba aghara.
Site n'ebe ahụ, anyị mepụtara “Tiger Teams” nke na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke mejupụtara nke ndị otu sitere na ọrụ ahịa anyị ọ bụla. Ndi otu a, nke ndi mmadu haziri, ha nwere ike imebi ihe ndi ozo, na-agba ume iche echiche zuru oke na omume di omimi iji jide n'aka na oru nile nke ndi okike anyi. nchịkọta, teknụzụ, nkwukọrịta na otu dijitalụ iji kpoo ahụmịhe ahụ site n'aka mmadụ ọ bụla.
Nzọụkwụ 2: Chọpụta Key Akaụntụ
Ebumnuche gị ekwesịghị ịga n'ihu ruo mgbe ahịa na azụmaahịa kwenyere na njirisi nhọrọ nnabata yana, n'ikpeazụ, azụmaahịa ịchọrọ. Kedu njirimara ma ọ bụ njirimara na-egosi akaụntụ dị elu maka gị (na onye isi gị)? Ihe niile dabere na ụlọ ọrụ gị, ihe ndị ị na-ebute ụzọ, yana data na nchịkọta ụdị gosipụtara uru ịkọ ọdịnala n'oge gara aga.
Anyị nwere obi ụtọ na Dun & Bradstreet ịnweta otu ihe ahụ data na nchịkọta ikike anyị mepụtara maka ndị ahịa anyị. Anyị na-eji usoro nyocha na ntinye uche na-agwa anyị onye ọ ga-abụrịrị na ọ ga-eme ka mmekọrịta ha na anyị, onye anyị nwere ike ịgafe na-ere na onye nwere ihe ọghọm nke ịghara imegharị.
Estimchọpụta atụmatụ nke na-adabere n'ụkpụrụ ịlele anya na-agwa anyị akụkọ na usoro azụmahịa na-enye anyị ohere kacha mma. Dịka ọmụmaatụ, na nyocha anyị nke ndị ahịa anyị, ụlọ ọrụ ndị e buru amụma na ha ga-agbaso mgba na nso nso ka nwere ike nwee mmasị na ahịa na ịre ahịa anyị. Demanddị atụmatụ ị chọrọ na-eme ka anyị gafee naanị ihe akaụntụ nwere ike ịzụta - ha na-enyere anyị aka ịkọ ihe azụmahịa ga-abụ.
Maka nkewa, anyị na-ele anya ka ị dakọ ụdị ire ere dabere na otu anyị siri nwee ihe ịga nke ọma site na ntanetị, nha, omume ịzụta na ikike ịzụta. Ọrụ nchịkọta nyochaa nke mgbali ire ahia na-eduga na mmeghari ohuru, nke bụ isi ihe na-elekwasị anya n'ihe ndị a pere mpe n'ebe ndị ahịa dị oke egwu ma bara uru dị elu. Ibu ụzọ na ire ahịa na-eme ka a mata ebe ndị a na-elekwasị anya maka atụmatụ go-to-market na akaụntụ na izi ozi mmadụ.
Kwụ na Ckwụ 3: Aka nka gị-Dabere Izi ozi
2zụta BXNUMXB gụnyere ọtụtụ ndị na-eme ihe ike na ndị na-azụ ahịa, nke pụtara na ị ka ga-azụlite ọtụtụ personas chọrọ ozi izi ezi.
Na olile anya, ugbua ịchọpụtala ndị ahịa gị kachasị mma, ị kwesịrị inwe nghọta ka mma banyere ịgwa ha okwu. Ọ bụghị naanị na ị ga - enwe ike ịlele nnukwu nsogbu ha, isi ihe mgbu na ebumnuche ha, mana ị ga - enwe ike ịchọpụta ọwa ahịa azụmaahịa ha kacha arụ ọrụ. Nke a ga - enyere gị aka ikpebi hazie ozi gị.
Ma ọ bụ site na email ma ọ bụ ozi ederede, ma ọ bụ ụzọ dijitalụ, ị ga-azụlite usoro ịzụ ahịa ọdịnaya nwere ọgụgụ isi nke na-asụ asụsụ ha ma nyere ha aka iru ihe mgbaru ọsọ ha. Na njedebe nke ụbọchị, ọ bụghị banyere gị; ọ bụ banyere ha. Nke ahụ bụ ụda ga-enyere aka mepee ọnụ ụzọ na akaụntụ ndị siri ike.
Kwụpụ 4: Oge eruola imezu
Ka ị na-eme usoro ndị a dị n'elu, ọ dị oke mkpa ịdabere na ndị KPI iji tụọ mmetụta nke mkpọsa gị ma kọwaa njikarịcha n'ọdịnihu. Usoro ABM na-aga nke ọma nwere mkpịsị aka ya na usoro nke usoro anọ a:
Aka Aka: N'ọdịmma azụmahịa nke mkpọtụ na-achịkwa, ụzọ kachasị mma iji mee ka njikọ aka bụ site na ịhazi ahụmịhe dijitalụ nke onye ahịa. Ọ dị mkpa ilele usoro ọnụọgụ dị ka ịpị aka na ibe ọdịda dị mkpa, oge ejiri na saịtị na mgbanwe ndị ahịa iji hụ etu ndị ahịa a si anabata ozi gị.
Ahịa afọ ojuju: Agbanwe mgbanwe na afọ ojuju ndị ahịa metụtara n’ọdịmma ego gị n’ọdịnihu. Nwere ike ịlele ha site nyocha ndị ahịa nkeonwe, ọnụ ọgụgụ NetPromoter buru ibu, nyiwe nyochaa sọftụwia azụmaahịa yana mkparịta ụka mmekọrịta ọha na eze.
Ọdọ: Nke a kwụ ọtọ, mana nzaghachi na usoro ọ bụla nke ọkpọkọ ahịa gị ga-enye gị ihe ngosi nke ọkwa ntinye aka nke ndị ahịa gị. Ka gị na ndị ahịa gị na-emekọrịta ihe, ọdụ gị ga na-ebuwanye ibu.
ọnụ ọgụgụ: Nke a bụ ihe ngosipụta kasịnụ nke atụmatụ ABM na-aga nke ọma-n'ihi na na njedebe nke ụbọchị, ọ bụghị maka ndu emepụtara, mana akụkọ meriri. Ego ole ka azụmahịa gị ọsọ rịrị elu? Mgbatị nkwekọrịta gị ọ toro?
Kwụpụ 5: Echefula Tụọ ihe niile
Ebumnuche ABM chọrọ oge iji tolite ma tozuo. Cheta, ị ga-achọ data bara ụba na nghọta iji hazie mmekọrịta gị na iwusi mmekọrịta akaụntụ gị ike. Ọ bụrụ na edozighi ya, ohere ABM nwere ike ịkwụsị. Na nke ọzọ, mmekọrịta mmekọrịta nwere ike iwepụ ngwa ngwa, na-egbochi uto nke usoro ndị ọzọ metụtara ABM ndị ị ka kwesịrị ime.
Thegbanwe mgbanwe na atụmatụ ABM nwere ike inyere gị aka ịmata akụkụ kachasị nke uto gị na n'ikpeazụ lekwasị anya na mmeri azụmahịa ọhụrụ. Mana ọ na-ewe nghọta miri emi banyere data gị yana otu njikọta otu. Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịhapụ ohere ndị dị mkpa iji wepụ azụmahịa ọhụrụ n'aka ndị ahịa gị kachasị baa uru.
Tags: abmahia dabere na ahịab2bazụmahịa na azụmahịadbbdun na bradstreet
Rishi Dave bụ onye isi ahịa ahịa maka Dun & Bradstreet. Rishi sonyeere Dun & Bradstreet na February 2014 site na Dell ebe ọ bụ onye isi oche nke ahịa dijitalụ. Rishi nwere ogo na injinị kemịkal na akụnụba site na nsọpụrụ na Mahadum Stanford yana MBA n'ahịa sitere na Wharton School, Mahadum Pennsylvania.
Ndị a bụ Pọdkastị na-amasịkarị Ndị Obodo Anyị
E-azụmahịa Takeaways si Early Spring Marketing Mgbalị